ချီလေတဲ့ …… ချီလေ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » My Dear Diary » ချီလေတဲ့ …… ချီလေ
ချီလေတဲ့ …… ချီလေ
Posted by စိန်ကြက်ဆင် on Oct 3, 2012 in My Dear Diary, Short Story | 25 comments
ကြီးဒေါ် ဒေါ်မြင့်မြင့်ကြည် သီချင်းလေး တစွန်းတစ ရွတ်နေမိပါသည်။ နွေဦး မဟုတ်ပေမဲ့ လေကတော့ တဖြူးဖြူးနဲ့ကိုး ….
သီချင်းတော့ အပြည့်မရတော့ပါဘူး ဟိုတစ်ချိန်က တစွန်းတစ ကြားဖူးတာလေးပါ ဘာတဲ့ … ချီလေတဲ့ ချီလေ.. ထိုစဉ်မှ ဟိုတောင်တန်း ကျော်လွှားလို့သာ .. အာ..အာ မြတ်ပန်းရဂုံ ဒန့် တန့် ဒယ်…. သိတော့ဘူးဗျာ။
နေရာကား မွန်ပြည်နယ် ကျိုက်ထိုမြို့ အရှေ့ဘက် ကမ္ဘာ့တန်းဝင် ဘုရားရင်ပြင်ပါ မကျန် လေလံဆွဲခြင်း ခံထားရသော ကျိုက်ထီးရိုး ဆံတော်ရှင် ဘုရားကြီးအား လွန်မြောက်သော သကာလ အရှေ့ဘက် ယွန်းယွန်းရှိ ဒေါနတောင်တန်းကြီးနှင့် အပြိုင်စီးဆင်းနေသော မြစ်အတွင်းဝယ် အကျနုတ်သည်ကား ဒေသခံလူများဟု ထင်ရသော စောယူစွတ်၊ စောအာမက်၊ စောဟုန်ကျင့်၊ စောတိန့်ဖိန်း တို့နှင့်တကွ တစ်လှေတည်းစီး တစ်ခရီးတည်း အတူသွား….နေချိန် …..။
အချိန်ကား မွန်းလွဲ ၂နာရီခန့်သာသာပင် ဖြစ်လင့်ကစား အုံ့အုံ့မှိုင်းမှိုင်း တိမ်သားထုတို့အောက်ဝယ် ပြိုဟန်ဆင်ရိပ်ရှိသော အထက်မိုးကောင်းကင်၏ အောက်ဝယ် အလိုက်အထိုက်ထက်ပိုသော လေအေးတို့သည် ကလူကျီစယ်သည်ထက် ပင့်မြောက်သယောင် ခြိမ်းခြောက်သယောင်နှင့် စိတ်အစဉ်အား တို့ထိသွေး…စမ်းနေချိန်….။
အကြောင်းအရာကား ဘာရယ်မဟုတ်၊ မဟုတ်ရယ်ဆိုလဲ ယုတ်တိမတန်၊ မတန်ရာ ဆင်ခြေဖြင့်လဲ ပြောဖို့ရယ် အခြေမသာ၊ တိတိပပ လှစ်ဟရသော် ကျားမနိူင် အမည်ရှိ ဆေးမြစ်တမျိုး ပြည်တွင်း အကြောပြေ လိမ်းဆေး ဈေးကွက်အတွက် ထိုးဖောက်ခြင်းမမည်၊ ကုန်ကြမ်းရှားပါးမှု အကြောင်းတည်၍ ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်မှု သဘောဆောင်စေကာ လူစားသွား ပွဲစားလုပ် အ၀ယ်တော် အမည်ခံ မလှိမ့်မပတ် ထဲဒဲ့ ခရီး….နှင်နေချိန် …။
ဖွဲ့ချီလိုသည်ကား ကြောင်းရာဖွဲ့တည် စာနှယ်စီ၍ အတင်းတပုဒ်၊ သတင်းလုပ်ကာ တင်ပြသည်ဝယ် လုံးရေမပြည့် ကျုံ့သေ့စေခြင်း မရှင်းဖြစ်ဝယ် ပြစ်မယ်တည်ကျန်၊ အမှန်ကိုလဲ ချင့်ချိန်ဆွဲ၍ ထောက်ညာတင်ထား အချင်းများခြင်း သက်ဆင်းကြုံလျှင်၊ စီလျော် ကျိုးကြောင်း ဆိုးကောင်းရင်းထက် နှောင်းဖြစ်မဲ့ကုန် အလုံးစုံသည် လွှဲမှားတွေးယူ အဆူဆူသော ပြုဖွအရပ် မှတ်၍ထင်မြင် အများချဉ်သော စာမူရှင်မို့ မှန်သည်ဖြစ်စေ ပုဂ္ဂိုလ်ထွေ၍ ရောယှက် ထွေးရှုပ် လိုရင်းမြုပ်မည်လည်း …. စိုးနေချိန်။
ဆိုလိုသည်ကား တစ်နေရာသို့ အရောက် ဟိုဘက်ကမ်းတွင် သွားကြားထိုးတံ အချိန် ၇၀၀ခန့်၊ သည်ဘက်ကမ်းတွင် သွားကြားထိုးတံ အချိန် ၁၂၀၀ခန့် စုံပုံနေသည်ကို လူတစုမှ အနည်းငယ် ၈ချောင်း ၁၀ချောင်းခန့် တ၀င်းဝင်းလက် အရာများဖြင့် မှတ်တမ်းတင်ခြင်းသမှု ပြုနေသည်ကို စိတ်တွင် ထူးဆန်း ဘ၀င်လဲမကျ ပေါ်တင်လဲ မမေးရဲ၍ တိုးတိတ်မေးကြည့်ရာ အပြသဘောဆောင်နေကြောင်း သိရသည်တမုံ့ အငုံ့စိတ်ကို အကြာဖျောက်၍ ဘယ်သူ့ဟာတွေတုန်းမို့ဟု မြန်မာသံဝဲ၀ဲဖြင့် မေးမြန်းရာ
အချိန် ၇၀၀ခန့်မှာ အနားယူသွားသူ ဒုတိယဘုံဆင့် အမြင့်ရှိသော အရှင်ကြီး၏ သွေးချာရင်နှစ် သားချစ်အမည် ခံကာတည်ပြု ၄င်းတို့၏ ဆွေမျိုးတဖုံ ….
အချိန် ၁၂၀၀ခန့်မှာ ကာလရှည်ကြာ နားယူနေမှ တဖန်ချစ်ခြင်း ပြန်သက်ဆင်း၍ ကောင်းကျိုးတည်ပြု အစုစုကို ထုဖော်နေသူ ( )မျိုးဆက်တို့၏ အစုအဖွဲ့တည်း ….
ဤတွင် အကျနုတ်၏ အတင်းသတင်းကြီး ပီးလတ္တံ့ ( ခရီရ်ဒစ်တူ ဟာနုအံ )
ထိုနှစ်လီကို ပြုဖွယ် ငြင်းခုံ
ချီလေတဲ့ ….. ချီလေ
ပထမဆုံး လာအားပေးလို့ ကျေးဇူးပါ အူးပေ..
ခုနိမ့် ထမင်းဆိုင်လေးမှ တညင်းသီးချက်လေး သတိရပါကြောင်း..။
ယခုမှစ၍ ဘလာဒီမာရဲစည်အား အလည်လာလျင် အိမ်သာအသုံးပြုခွင့် ပိတ်လိုက်သည်
အဲဒီ မီးခြစ်ဆံတွေယူခဲ့  ပေါ့ကရဲစီရယ်
ဒီရောက်ရင်ဈေးကောင်းရချင်ရမှာ ဒါနဲ့ 
ဖိုးမူ လေးတွေရောတွေ့ ခဲ့ သေးလား
မီးခြစ်ဆံဟုတ်ပါဘူးဗျ အူးလေး ဆာမိရ သွားကြားထိုးထံပါ…။
ကျနော်က နှမြောတာပါ.. ဒီအတိုင်း အကြမ်းထည်ပို့မဲ့ အစား အချောထည် လုပ်ပီး အပြင်ထုတ်ရောင်းရင် ဒိထက်ပို ရနိူင်မယ်လို့လဲ ထင်လို့ပါ။
သွားကြားထိုးတံ လုပ်လို့ တောပြုန်းကုန်တာပေါ့တော်..
တချို့နေရာတွေ ပေ ၄၊ ၅ထောင်ကျော် မတ်မတ်စောက်စောက်တွေမို့ လောလောဆယ် မကုန်သေးပါကြောင်း။ စောမူတူးတို့ စောအာမက်တို့ စောဟုန်လျောင်တို့ လာနေပီဆိုတော့
မကြာခင် ဒေါနတောင်တန်းကြီးလည်း အနော့်ကေနီးနီး မြင်ရတော့မည် ဖြစ်ပါကြောင်း….။
ဒါတောင် အချို့အရပ်များ လက်လှမ်း မမှီသေးလို့ ကျန်နေသေးသဗျို့…။
တော့ ကယွဲစည် ဒီတခေါက်သွားတာ တယ်ကြာသကိုး။ ပြန်လာတေ့ာလဲ သွားကြားထိုးတံ ကိတ်စ သတင်းလုပ်ရေးရတယ်လို့။ အဲဒီ သွားကြားထိုးတံ ရွာထဲကလူတွေကိုပြရအောင် နမူနာလေးတချောင်းလောက် ယူလာခဲ့ရောပေါ့တော်။ ဒီကလူတွေက မက်စိနဲ့မမြင်ရရင် ယုံကြတာမဟုတ်မှန်းသိသားနဲ့။ :harr:
ရွာထဲက လူများအတွက် နမူနာ မရတောင် ဒတ်ပုံလေးတော့ ရိုက်ချင်သား ..။
သို့ပေသိ အနော့် ကင်မလာ အစုတ်ကလေးကို အစကတည်းက သူရို့သိမ်းထားလိုက်ကြသဗျို…။
ဒါကြောင့်မို့ မပြနိူင်တာမို့ ယုံချင်ယုံ မယုံလျှင်လည်း သဘောအတိုင်းပါဗျို့….။
သူက သွားကြားထိုးတံရမလားဆို ဂွင်သွားရှာတာ… ကိုယ့်ထက်ဦးတဲ့လူက
ဟိုဘက်ကမ်းတောင်ပို့ပြီးနေလို့ ၀မ်းနည်းမှောက်လျက် ပိုစ့်ရေးတင်ရရှာတယ်…
အူးလေး အစ်ကို ဘရာသား အန်ကယ် ကြောင်ဝရေ…
၀မ်းနည်းတာထက် အကျိုးဆက်တခု ပိုရပါကြောင်း ..။
သူများမကောင်းကြောင်း .. ကိုယ့်ကောင်းကြောင်းကို ပြန်လာမှ အတင်းတုတ်တော့မယ်ဗျို့
အထူးအဆန်းတွေ ကြားသိတွေ့မြင် ခဲ့ရပါ၏။
ချီလေတဲ့ .. ချီလေ ..
ရီစေဒဲ့ .. ရီစေ ..
ခွီ .. ခွိ .. ခွိ .. အဟိ .. ((( ဂွိ )))
ဗိုက်ချာလာပီ …. (ဘာမှလည်း ဆိုင်ဝူး)
ဟေ့လူ ဥရဲစိ ..
ကျုပ်လည်း မန့်ချင်ဒါ .. ဘာမန့်ရမှန်း မသိဒါနဲ့ .. ဂလိုဘဲ မန့်ခဲ့ဒယ်ဂျာ ..
မကျေနပ်လည်း အသေသာ သတ်လိုက် (ခြင်ဒွေဂို ပေါဒါ)
သွားလေသူအစုအဖွဲ့ အဖြစ် ကိုရဲစည်ကရာထူးတိုးမပေးခဲ့ဘူးလား….။
သွားကြားထိုးတံတွေကို ဂဇက်ပိုင်သိမ်းရမှာ သဂျီးအမိန့်နဲ့……………။
ဟဲ့ ငခြောက်မ တောင်ပြုန်းမ
ဘယ်ချောင်မှာ ဘာပြုနေလို့ ခုမှ ရွာထဲဝင်ရသတုံး
ဟဲ့ ပလုပ်တုတ်။ ဟိုဟာ..ကြိးက….
ဖရဲမ …ပေါ့နော် ။
ညည်း နှယ်….အပျော်အပါး မက်လိုက်တာ ။
ညည်းကို ကိုယ်တော်ကြိးကိုယ်တော်လေး.နဲ့ ကို..တိုင်ဦးမယ် ။ တကတဲ….
ဘယ်တွေ..သွားနေလို့ ပျောက်ချက်သားကောင်းနေရတာလဲ ။
ဗလာဒီမာ သုကျိတ် ရဲစည်
အဲဒီ သီချင်းက ခင်သစ်လွင်ရဲ့ ပန်းရည်ဘဏ်တိုက် လေ။
ဒို့ရွာတွက် ဓမ္မာရုံ တိုင်လုပ်ဖို့ သွားကြားထိုးတံ ၄-၅ ချောင်းလောက်ဆွဲခဲ့ရောပေါ့အေ။
လုံးဝ.. အလုံးအလုံးတွေ… အ၀…တည့်တည့်ရောက်နေတာတောင်.. ကျသည်မဟူ.. မကျသည်လည်းမဟူ..
နားဆိုသော လူ၏ဦးခေါင်းဘယ်ညာဘေးဖက်တွင်.. ထောင်၍၄င်း.. ကပ်၍၄င်း..ရှိနေသော.. လူ့ဒွာရပေါက်တခုဖြစ်တော်မူထသော အရာ.. လည်သည်ပြောသော်လည်း.. မလည်ခြင်းသဘောရှိတော်မူထသော.. အရာ…
ကျုပ်က သိပ်ဉဏ်မမှီလို့ဒီလိုပေါက်တယ် B…………….
( ဆိုလိုသည်ကား တစ်နေရာသို့ အရောက် ဟိုဘက်ကမ်းတွင် သွားကြားထိုးတံ အချိန် ၇၀၀ခန့်၊
သည်ဘက်ကမ်းတွင် သွားကြားထိုးတံ အချိန် ၁၂၀၀ခန့် စုံပုံနေသည်ကို )
အထက်ပါအကြောင်းအရာအား အီးယောင်ဝါးနည်းပညာဖြင့် ရှာဖွေဖေါ်ထုတ် အဖြေလုပ်ကြည့်ရာ
ဟိုဖက်ကမ်းတွင် သစ်အလုံး ခုနစ်ရာခန့် ( ဝါ ) သစ်တန်ချိန်ခုနစ်ရာခန့်
သည်ဖက်ကမ်းတွင် သစ်အလုံး ထောင့်နှစ်ရာခန့် ( ဝါ ) သစ်တန်ချိန်ထောင့်နှစ်ရာခန့်
( လူတစုမှ အနည်းငယ် ၈ချောင်း ၁၀ချောင်းခန့် တ၀င်းဝင်းလက် အရာများဖြင့် မှတ်တမ်းတင်ခြင်းသမှု
နိုင်ငံတော်တာဝန်ရှိစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့က သစ်ရှစ်ချောင်း ဆယ်ချောင်းခန့်ကို ဓာတ်ရိုက်ဓာတ်ဆင်
ကရိယာဖြင့် ဓာတ်ရိုက်ဓာတ်ဆင်လုပ်ပြီး ( ဆိုလိုတာက ဒီလောက်ဘဲပေါ့ )
ကျန်တာကတော့ အဲ့သည်အတိုင်းပေဘဲလို့ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုလိုက်သည်
မှတ်ချက်။ ။ ဤကားရမ်းချခြင်းသာဖြစ်၍ မမှန်ခဲ့သော် ဘင်္ဂါလီလိုရေးသားစေ။
စိတ်တွင် ထူးဆန်း ဘ၀င်လဲမကျ ပေါ်တင်လဲ မမေးရဲ၍ တိုးတိတ်မေးကြည့်ရာ အပြသဘောဆောင်နေကြောင်း
သိရသည်တမုံ့ အငုံ့စိတ်ကို အကြာဖျောက်၍ ဘယ်သူ့ဟာတွေတုန်းမို့ဟု မြန်မာသံဝဲ၀ဲဖြင့် မေးမြန်းရာ
အချိန် ၇၀၀ခန့်မှာ အနားယူသွားသူ ဒုတိယဘုံဆင့် အမြင့်ရှိသော အရှင်ကြီး၏ သွေးချာရင်နှစ်
သားချစ်အမည် ခံကာတည်ပြု ၄င်းတို့၏ ဆွေမျိုးတဖုံ ….
အချိန် ၁၂၀၀ခန့်မှာ ကာလရှည်ကြာ နားယူနေမှ တဖန်ချစ်ခြင်း ပြန်သက်ဆင်း၍ ကောင်းကျိုးတည်ပြု အစုစုကို
ထုဖော်နေသူ ( )မျိုးဆက်တို့၏ အစုအဖွဲ့တည်း ….
NLD ဘာလုပ်နေသလည်း .ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဘာလုပ်နေသလည်း မေးရတော့မှာပဲ..။
အတိုက်အခံဆိုတာ.. ဒီလိုနေရာမျိုးမှာ အလုပ်ထမလုပ်.. ဘယ်နေရာလုပ်ချင်နေသလည်း… လို့.. ။
သစ္စာရှိသော အတိုက်အခံပါဆိုနေမှ ဒါမျိုးပြောစရာလား…။ ဘွားဒေါ်ဂျီးလည်း မအားဘူး၊ အမေရိကန်က ဝယ်လာတဲ့ ပစ္စည်းတွေ လေဆိပ်မှာ အသိမ်းခံရလို့ လိုက်ရွေးနေရတယ်။ Centrum Silver ဆယ်ဗူးတောင်ပါသတဲ့…။ :ha: